Loollanka aydoolajiyadaha iyo agoonta aragtida ka arradan! – Bashiir M. Xersi
Date: 15 Jul 2015Author: Bashiir M. Xersi 2 Comments
Previous Previous post: Maansada: Xannib-diid!
Next Next post: AHLUSUNNO iima dhaamto ALSHABAAB!
2 thoughts on “Loollanka aydoolajiyadaha iyo agoonta aragtida ka arradan!”
16 Jul 2015 at 3:39 am
qoraalkaan waan xiiseynayay, lakin ma dhameysan oo dhexbaan uga tagay kadib markii aan ku caajisay, waayo waxaa ka buuxa hadalo tira badan oo aan ka tarjumeyn nuxurka qoraalka. Hadalna waxa ugu qiima badan midkiisa yar, ee dulucda ku tusiya.
17 Jul 2015 at 1:32 am
Waan kuka qabaa badanaa qoraagan waxaa uu qoro waa muhiim aragtiisa ka tarjumaysa laakiin aad buu u dheereeyaa qoraalka oo nuxurkuu ka dilaa. Midda kala mursi waa dhibane ay heystaan dhibayaal xukun doon ah